ရုရှားသူလေး မဝသုန်မိုး စိတ်မကောင်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မြန်မာစာပေကို ဂရုမစိုက်တဲ့ မြန်မာတွေအကြောင်း....
ရုရှားသူလေး မဝသုန်မိုး စိတ်မကောင်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မြန်မာစာပေကို ဂရုမစိုက်တဲ့ မြန်မာတွေအကြောင်း….
မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘဲ မြန်မာစာကို ကျွမ်းကျင်မှန်ကန်အောင် ရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူက ရုရှားသူ မဝသုန်မိုးပါ။တက္ကသိုလ် စတက်တော့ ဘယ်ဘာသာကို အထူးပြု သင်ယူရမလဲလို့ ရွေးချယ်ရင်း မြန်မာစာလုံးတွေကို မြင်တာနဲ့ ချစ်သွားလို့ မြန်မာစာ စသင်ဖြစ်တာလို့ မဝသုန်မိုးက ပြောပါတယ်။
သူက အခု မော်စကိုက တက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာစာ ဆရာမ လုပ်ရင်း PhD ပါရဂူ ဘွဲ့ အတွက် စာတမ်း ပြုစုနေပါတယ်။သူ့စာတမ်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ ဘာသာစကားတွေ အားလုံးအကြောင်းနဲ့ ဘာသာစကား အချင်းချင်း သက်ရောက်တဲ့ ပုံစံတွေကို လေ့လာနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်
မြန်မာပြည်ရောက်ရင် မြန်မာ ဝတ်စုံတွေပဲ ဝတ်တဲ့သူ၊ မြန်မာ အစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူ၊ မြန်မာ အက ကြိုက်သူ မဝသုန်မိုး ပြောပြတဲ့ မြန်မာတွေ ရေးသားပြောဆိုနေတဲ့ မြန်မာစာ အကြောင်း နားဆင် ရှုစားနိုင်ပါတယ်။
မေးမြန်း – ရီရီအောင်
မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘဲ မြန်မာစာကို ကျွမ်းကျင်မှန်ကန်အောင် ရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
သူက ရုရှားသူ မဝသုန်မိုးပါ။တက္ကသိုလ် စတက်တော့ ဘယ်ဘာသာကို အထူးပြု သင်ယူရမလဲလို့ ရွေးချယ်ရင်း မြန်မာစာလုံးတွေကို မြင်တာနဲ့ ချစ်သွားလို့ မြန်မာစာ စသင်ဖြစ်တာလို့ မဝသုန်မိုးက ပြောပါတယ်။သူက အခု မော်စကိုက တက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာစာ ဆရာမ လုပ်ရင်း PhD ပါရဂူ ဘွဲ့ အတွက် စာတမ်း ပြုစုနေပါတယ်။
သူ့စာတမ်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ ဘာသာစကားတွေ အားလုံးအကြောင်းနဲ့ ဘာသာစကား အချင်းချင်း သက်ရောက်တဲ့ ပုံစံတွေကို လေ့လာနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်
ရုရှားသူလေး မဝသုနျမိုး စိတျမကောငျးစှာ ရငျဖှငျ့လာတဲ့ မွနျမာစာပကေို ဂရုမစိုကျတဲ့ မွနျမာတှအေကွောငျး….
မွနျမာလူမြိုးမဟုတျဘဲ မွနျမာစာကို ကြှမျးကငျြမှနျကနျအောငျ ရေးနိုငျ၊ ဖတျနိုငျ၊ ပွောနိုငျအောငျ ကွိုးစားနတေဲ့ နိုငျငံခွားသူ တဈယောကျရှိပါတယျ။သူက ရုရှားသူ မဝသုနျမိုးပါ။တက်ကသိုလျ စတကျတော့ ဘယျဘာသာကို အထူးပွု သငျယူရမလဲလို့ ရှေးခယျြရငျး မွနျမာစာလုံးတှကေို မွငျတာနဲ့ ခဈြသှားလို့ မွနျမာစာ စသငျဖွဈတာလို့ မဝသုနျမိုးက ပွောပါတယျ။
သူက အခု မျောစကိုက တက်ကသိုလျမှာ မွနျမာစာ ဆရာမ လုပျရငျး PhD ပါရဂူ ဘှဲ့ အတှကျ စာတမျး ပွုစုနပေါတယျ။သူ့စာတမျးက မွနျမာနိုငျငံမှာသုံးတဲ့ ဘာသာစကားတှေ အားလုံးအကွောငျးနဲ့ ဘာသာစကား အခငျြးခငျြး သကျရောကျတဲ့ ပုံစံတှကေို လလေ့ာနတေယျလို့ ပွောပါတယျ
မွနျမာပွညျရောကျရငျ မွနျမာ ဝတျစုံတှပေဲ ဝတျတဲ့သူ၊ မွနျမာ အစားအစာ ကွိုကျနှဈသကျသူ၊ မွနျမာ အက ကွိုကျသူ မဝသုနျမိုး ပွောပွတဲ့ မွနျမာတှေ ရေးသားပွောဆိုနတေဲ့ မွနျမာစာ အကွောငျး နားဆငျ ရှုစားနိုငျပါတယျ။
မေးမွနျး – ရီရီအောငျ
မွနျမာလူမြိုးမဟုတျဘဲ မွနျမာစာကို ကြှမျးကငျြမှနျကနျအောငျ ရေးနိုငျ၊ ဖတျနိုငျ၊ ပွောနိုငျအောငျ ကွိုးစားနတေဲ့ နိုငျငံခွားသူ တဈယောကျရှိပါတယျ။
သူက ရုရှားသူ မဝသုနျမိုးပါ။တက်ကသိုလျ စတကျတော့ ဘယျဘာသာကို အထူးပွု သငျယူရမလဲလို့ ရှေးခယျြရငျး မွနျမာစာလုံးတှကေို မွငျတာနဲ့ ခဈြသှားလို့ မွနျမာစာ စသငျဖွဈတာလို့ မဝသုနျမိုးက ပွောပါတယျ။သူက အခု မျောစကိုက တက်ကသိုလျမှာ မွနျမာစာ ဆရာမ လုပျရငျး PhD ပါရဂူ ဘှဲ့ အတှကျ စာတမျး ပွုစုနပေါတယျ။
သူ့စာတမျးက မွနျမာနိုငျငံမှာသုံးတဲ့ ဘာသာစကားတှေ အားလုံးအကွောငျးနဲ့ ဘာသာစကား အခငျြးခငျြး သကျရောကျတဲ့ ပုံစံတှကေို လလေ့ာနတေယျလို့ ပွောပါတယျ
အမေရိကန်တွေကို ထိုင်ဝမ်မြေပေါ်မှာ သတ်ပစ်တဲ့အလုပ်ဟာ လုံးဝတရားမျှတမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ တ ရုတ် ( လုပ်ကြည့်လိုက်လေ နောက်ဆက်တွဲက ထမင်းရည်သောက်ရမှာသေချာတယ် )
“မင်းရဲသိင်္ခသူ” မှသည် သုံးဘက်မြင် စစ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ရေတပ်ဖွဲ့ကြီး (Three Dimensional Navy) ဆီသို့ ( အပိုင်း-၂ )
ကပ်ရောဂါအကျပ်အတည်းကြား မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်တွေအတွက် ဈေးကွက်သစ်တွေ့ ( အခက်အခဲထဲက အခွင့်ရေး .. သာကောမရှိလည်းဖြစ်တယ်…)
မန္တလေးခရိုင်အတွင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် ရာနှုန်းပြည့် လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်တော့မည်ဟုဆို